बाँकेमा टिटानस सुई अभाव – Pahilo Page
२८ भाद्र २०७५, बिहीबार १३:१७ 452 पटक हेरिएको
बाँके, २८ भदौ । बाँकेमा टिटानस सुई अभाव भएको छ । चोटपटक लागेका बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने सुई अभावका कारण उपचारका लागि अपस्ताल आउने बिरामी यस सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले अस्पतालले सो सुई उपलब्ध गराउने नभई बिरामी आएको खण्डमा बिरामीले नै खरीद गर्नुपर्ने भएकाले अस्पताललाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । “टिटानसको सुई नभएको खण्डमा विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने विधि छ तर जुन सामान्यभन्दा अलि महँगो हुन्छ”, डा. थापाले भन्नुभयो ।